खुम्चियो लुघवित्तको लाभांश आकार, अघिल्लो वर्ष सिरानमा रहेको मिर्मिरे अहिले पुछारमा (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । कोरोना कहरका कारण व्यापारमा कमी आउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांशको आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा खुम्चिएको छ। हालसम्म घोषित भएकाहरुको आँकडा हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लघुवित्तहरुले अधिकतममा ४७ प्रतिशत बढी र न्यूनतममा १० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेका थिए। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने...
कतिवटा विकास बैंकले घोषणा गरे लाभांश, कसको कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि हालसम्म आधा दर्जन बढी विकास बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्। हालसम्म ७ वटा विकास बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् भने अब आधाजसो विकास बैंकले लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। प्रस्तावित लाभांशमध्ये सबैभन्दा बढी मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको बढी देखिएको छ। यो बैंकले कुल १५.७९ प्रतिशत...
राष्ट्र बैंकद्वारा छिमेक लघुवित्तको २९% लाभांश स्वीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको कुल २९ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले छिमेक लघुवित्तद्वारा प्रस्तावित लाभांश हिजो सोमबार स्वीकृत गरेको हो। छिमेक लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षका लागि २२ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्र...
प्राइम कमर्सियल बैंकले १५% बोनस सेयर बाँड्ने
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १३ अर्ब ९८ करोड ५२ लाख ४९ हजार ५०० रुपैयाँको १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। बैठकले कुल २ अर्ब ९...
एनएमबी बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १४ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख ५२ हजार ९६६.९६ रुपैयाँको कुल १६.२० प्रतिशतले हुन आउने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा...
विजय लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, १९% बोनस सेयर
काठमाण्डौ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी २२ करोड ४० लाख ३१ हजार ५०० रुपैयाँको कुल २० प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ४८ लाख ६ हजार ३०० रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव...
काठमाण्डौ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले लाभांश प्रस्तावसँगै वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुल २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा १५ प्रतिशत नगद र १० प्रतिशत बोनस सेयर रहेका छन्। बैठकले कम्पनीको २८ औँ वार्षिक...
राष्ट्र बैंकद्वारा आशा लघुवित्तको प्रस्तावि लाभांश स्वीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्ताव गरेको कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले यो लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश हिजो बिहीबार स्वीकृत गरेको हो। यो लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८ प्रतिशतले हुन आउने...
मेगा बैंकद्वारा १३.०५% लाभांश प्रस्ताव
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आज बिहीबार बिहान बसेको बैठकले गत असार ३१ गतेसम्मको सञ्चित मुनाफा एवं वितरणयोग्य अन्य कोषहरुबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १३ अर्ब ३२ करोड २६ लाख ९५ हजार ४१६ रुपैयाँको कुल १३.०५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ११ हजार ७५१.७९...
तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले बोनस सेयरमात्र बाँड्ने, कति ?
काठमाण्डौ । तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयरमात्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। बैंक गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजीको ६ प्रतिशतले हुन आउने १० करोड ८७ लाख ८७ हजार ६३२.०५...
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरद्वारा लाभांश प्रस्ताव, ३०% हकप्रद पनि निष्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो मंगलबार साँझ बसेको बैठकले सेयरधनीहरुलाई सञ्चित मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा ५ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर र ०.२६ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश (कर...
लक्ष्मी बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो साँझ बसेको बैठकले कुल ११.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ९ प्रतिशतले हुन आउने ८८ लाख ३१ हजार ३०३.५६ कित्ता बोनस सेयर र २.५ प्रतिशतले हुन आउने २४ करोड ५३ लाख १३ हजार ९८८ रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश...
स्पर्स लघुवित्तद्वारा २०.५३% लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्तापुँजी ९ करोड ३७ लाख ४८ हजार १९० रुपैयाँको कुल २०.५३ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १९.५० प्रतिशतले हुन...
कृषि विकास बैंकद्वारा १५% बोनस सेयर बाँड्ने प्रस्ताव
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आज सोमबार बिहान बसेको बैठकले चुक्तापुँजीको कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यसैगरी...